Ogaden News Agency (ONA) – Waftiga Isbahaysiga SCF oo Maanta Gaadhay Gobolka Shiniile.
Waftiga Isbahaysiga SCF oo Maanta Gaadhay Gobolka Shiniile.
Waftiga Isbahaysiga Soomaaliyeed ee Xoriyada SCF oo baryihii lasoo dhaafay kusugnaa magaalada Dirdhabe ayaa maanta u anbabaxay Dagmooyinka Gobolka Shiniile (Siti) ee woqooyi galbeed Ogadenia.
Waftiga Isbahaysiga oo uu hor kacayo Mudane Xuseen Maxamed Nuur ayaa saaka lagu soodhaweeyay deegaano aad ubadan oo katirsan Gobolka Shiniile halkaas oo siwayn loogu soodhaweeyay.
Waftiga SCF ayaa maanta gaadhay Dagmada Dhambal ee Gobolka Shiniile halkaas oo dadwayne aad ubadan ay kula hadleen, waxayna waftigu udhaqaaqeen magaalada Harmukale oo iyadana siwayn loogu soodhaweeyay.
Sidoo kale waftiga ayaa socdaal kumaray deegaanada Adigala, Xareye, Game, Duure iyo waliba deegaano kale oo ay maanta waftigu kula hadleen kumanaan shacab ah oo si farxad leh kulamada uga sooqayb galayay, waxayna waftigu shacabka kula dardaarmeen midnimo.
Xildhibaan Cali Samire Sigad oo ah mas’uul sare oo Isbahaysiga SCF katirsan ayaa shacabka usheegay in maanta lajoogo xiligii lamidoobi lahaa hal meelna looraadsan lahaa xaqa shacabka Soomaaliyeed ee mudada dheer dulmanaa.
Waftiga Isbahaysiga iyo shacabka oo isku meel uwada socda ayaa kubalamay midnimo iyo Soomaalinimo iyo waliba in xaqa shacabka si nabad galiyo ah lagu raadsado.